Bangkok waxay u diyaar garoobeysaa musiibo weyn oo daadad ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Bangkok waxay u diyaar garoobeysaa musiibo weyn oo daadad ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Toddobo qof ayaa dhimatay laba kalena waa la la'yahay tan iyo Axaddii daadad ka dhashay duufaanta Dianmu.
Magaalada Bangkok ee caasimadda Thailand iyo aagag kale ayaa soo saaray digniin cusub oo ku aaddan fatahaad daran.
Illaa iyo hadda, 7 qof ayaa dhimatay 2 kalena waa la la’yahay daadad waaweyn oo ku dhuftay Thailand tan iyo Axaddii.
Guddoomiyaha Bangkok ayaa qiray in magaalada caasimaddu ay u nugul tahay daadad ka yimaada Chao Phraya.
Thailand Waaxda Ka Hortagga iyo Ka -hortagga Masiibooyinka ayaa sheegay maanta in toddoba qof ay dhinteen laba kalena la la'yahay tan iyo Axaddii daadad ka dhashay Duufaanta Tropical Dianmu.
Shirkadda Alaska Airlines ayaa soo bandhigtay jaceylka cusub ee San Francisco Giants iyagoo ku dabaaldegaya Garoonka Caalamiga ah ee San Francisco oo ay kujiraan masraxa Giants “Lou Seal”
Thailand masiibooyinka waxay ku dhawaaqday in 197,795 qoys oo ku nool 30 gobol, badankood woqooyiga, waqooyi-bari iyo gobollada dhexe ay saameeyeen-koror boqolkiiba 56 ah marka loo eego 126,781 oo la soo sheegay maalin ka hor. Roobab mahiigaan ah ayaa weli la saadaalinayaa in ay ka dhici doonaan deegaano badan.
Hadda, magaalada caasimadda ah Bangkok iyo aagagga kale ee bartamaha Thailand ayaa la soo saaray digniino cusub oo ku aaddan fatahaad daran, xitaa sida mas'uuliyiinta gargaarka musiibada ayaa sheegay in hanjabaaddu ay ka sii yaraanayso 13 ka mid ah 30 gobol oo meelo kale ka mid ah oo ay ku dhufteen roobabka dabaysha xilliyeedka.
Biyo aad u badan oo ka soo qulqulaya Chao Phraya xagga woqooyi ayaa buux dhaafiyay biyo -xireenno iyo biyo -xireenno, taasoo dhalisay in digniino degdeg ah la siiyo Bangkok iyo gobollada Lopburi, Saraburi, Ayutthaya, Pathum Thani iyo Nonthaburi.
Bangkok Guddoomiye Aswin Kwanmuang ayaa qiray maanta in sababta oo ah caasimaddu ay ku taal dhulka hoose, ay u nugul tahay fatahaad ka timaadda Chao Phraya, oo aan si dhaqso ah loo daadin karin. Qeybo ka mid ah magaalada ayaa ku fatahay daad weyn oo dhacay 2011, oo ay ugu horeyn quudiyeen biyo laga soo saaray kaydadka waqooyiga.
Guddoomiyuhu wuxuu taxay tallaabooyin ay magaaladu qaadayso si ay ula tacaasho daadadka, oo ay ku jiraan diyaarinta bambooyin biyo oo ku xidha tunnel -ka weyn ee biyo -mareenka.
In kasta oo biyo -xireenno waaweyn iyo kayd -biyoodyo ku yaal woqooyiga ay ilaa hadda awoodeen inay la tacaalaan roobka sannadkan, kuwa kale ee ku dhow Bangkok ayaa soo dhawaaday ama dhaafey awooddooda bishan waxayna ku qasbanaadeen inay biyo soo saaraan.